Fitokanana fotodrafitr'asa teto Port-Bergé | Primature
31 mars 2017 30 janvier 2018
Port-bergé, 31 martsa 2017– Tonga nitokana fotodrafitr’asa taty amin’ny faritra Sofia, distrikan’i Port-Bergé sy Port-Bergé 2 sy tao amin’ny kaominina Tsarahasina ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier. Tonga niaraka taminy ny Minisitra eo anivon’ ny Fiadidiana ny Repoblika misahana ny Tetik’asan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana, Rafidimanana Narson ; ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Paza Didier ; ny Minisitry ny Asa Vaventy, Eric Razafimandimby ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Ranomasina, Randrianarisoa Léonide Ylénia.
Notokanana tao an-tampon-tananan’ny Port Bergé ny tranompokonolona izay marihina fa izy io no lehibe indrindra manerana ny faritr’i Sofia ; ny biraon’ny fananan-tany; ny biraon’ny zandarimariam-pirenena izay tao amin’ny kaominina Tsarahasina ; ary ny fitokanana ny bac ao amin’ny reniranon’ny Bemarivo, kaominina Port-bergé 2. Porofo izao fa mijery ny fomba rehetra anantonana ny vahoaka ny fitondram-panjakana
Laharam-pahamehana amin’ny fitondram-panjakana ny lafin’ny fandriam-pahalemana, ka atao manakaiky kokoa ny vahoaka ireo Zandary mba ahafahana miaro ny olona sy ny fananany amin’ny alalan’ny biraon’ny Zandarimariam-pirenena.
Toa izany koa ny biraon’ny fananan-tany, izay natao mba hialana amin’ny ady tany, sy hialana amin’ny fahasahiranan’ny olona tsy handeha lavitra amin’ny fanaovana bokin-tany.
Manaporofo ireo ezaka ireo fa tsy mipetraka fotsiny ny Fitondram-panjakana fa manao ny fomba rehetra mba hanalana fahasahiranana ny vahoaka mba ahafahana manampy ny vahoaka amin’ny fiainana andavan’andro mba ahafahana mamokatra, sy mampandroso ny fiainana andavan’andro.
Nandritra ny lahateny nataon’ny Praiminisitra no nanomezany hafatra ho an’ireo ben’ny tanàna ao amin’ny distrikan’i Port-Bergé : « Raha misy olom-boafidy tsy manaja ny lalàna dia tsy maintsy anarina. Tsy hifidianana tavan’olona, tsy hifidianana antoko politika izany. Fananarana no hevitr’izany. Aoka mba tsy hampiadian’olona amin’ny zavatra tsy misy heviny, satria ny fitondram-panjakana dia vonona hiara-hiasa amin’ny ben’ny tanàna rehetra eto Madagasikara na inona na inona antoko misy azy. Tsy maintsy hajaina anefa ny lalàna amin’ny sehatra maro. Fitadiavana fampandrosoana maharitra no tadiavina miaraka amin’ny ben’ny tanàna.”
Tsy adinon’ny Lehiben’ny Governemanta ihany koa ny nanipy teny tamin’ireo Sojabe izay nilazana fa “tena ilainay ny fisianareo sojabe. Misaotra anareo sojabe izay nahatsapa ny andraikitra izay hiantsorohanareo. Isaorako ireo sojabe izay manao ny ainy tsy ho zavatra manakiana anay sy ny Governemanta. Ray aman-dreny lolohavina an-tampon’ny loha ireny ary hajaina. Izahay tsy hamaly na indraim-bava aza amin’ireny fanakianana ireny. Mino sy manantena izahay fa manomboka izao dia samy hieritreritra ao anatin’izany ianareo sojabe fa aoka mba tsy hampiadian’olona noho ny resaka politika, satria ianareo sojabe no tena fitaratra. Vonona hanaraka ny anatra avy aminareo ny tenako. Raha misy ny tsy mety dia anarinareo izahay. Manantena fiaraha-miasa aminareo sojabe izahay. Manantena izahay fa hisy ny fiaraha-miasa miaraka aminareo, sy ny dinidinika iarahana, satria ilaina ato anatin’ny faritra Sofia ny firaisankina. Aleo hampandeferina ny ambompo. Azo atao ny miara miasa”.
Nisy ny fandraisam-pitenenana nataon’ny sojabe ka nitsofany rano ny Praiminisitra ary nanambarany fa “tsy manao politika izahay sojabe. Tsy miala fanjakana izahay ary tsy manohitra fanjakana. Miara dia amin’ny fanjakana izahay”.
Noresahin’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier tamin’ny firesahany tamin’ny mpanao gazety ny mahakasika ny fampihatoana ny ben’ny tanànan’ny Port-Bergé: “tsy misy resaka politika izay ary tsy vao amin’ny fitondrana izao no misy fampihatoana ben’ny tanàna. Efa nisy Bianco tonga teo Port-bergé. Amin’ny maha Lehiben’ ny Governemanta ny tenako dia tsy ekeko ny zavatra tahaka izany. Ankoatra izay dia misy zavatra maro tsy nety ka efa nisy ny fitsirihana taty an-toerana nataon’ny amin’ny Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjarampahefana mahakasika ny fitantanana ny tanàna. Zanaky ny Fitondram-panjakana ny kaominina fa rehefa manao ny tsy ara-dalàna dia azo saziana. Tsy ny Fitondram-panjakana no nanasazy azy fa nisy ny fanampahan-kevitra izay noraisin’ny mpanolontsaina, izay nangataka ny fampihatoana ny ben’ny tanàna. Ao anatin’ny lalàna manankery izany. Tsy naka io fanapahan-kevitra io ny Minisiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjarampahefana raha tsy nahazo ny fanapahan-kevitra avy amin’ny mpanolotsaina teto Port-Bergé. Fanajana ny lalàna manankery izay ary fampanajana ny fanjakana tandalàna. Tsy hifidianana faritra na distrika na kaominina fa rehefa misy ny tsy fanarahan-dalàna ka voahaja ny fepetra rehetra, indrindra ny fanapahan-kevitra avy amin’ny mpanolotsaina dia azo atao avy hatrany ny mampiato ao anatin’ny iray volana ny ben’ny tanàna iray”.
← Fanamafisana ny Dinan’ny fandriampahalemana sy fihavanana
Ouverture de la 2ème édition de L’african Business Connect, rencontre d’affaires entre Madagascar et les opérateurs Marocains →
“TEAM BUILDING” ETO MANTASOA